Xog: 130 ka mid ah ardayda Muqdisho oo halis ugu jira inay imtixaanka shahaadiga uga haraan sabab yaab leh – Benaadir News Network
Muqdisho (Benaadir News) – Benaadir News ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 130 arday ah oo ku nool magaalada Muqdisho ay wajahayaan halis weyn oo ay uga baaqan karaan Imtixaanka Qaranka ee dugsiga sare, kaasoo Sabtida ka billaaban doono Muqdisho.
Waaliidin badan ayaa Benaadir News u sheegay in ardaydooda oo Iskuulka joogay muddo aan ka yareen 12 sano in laga waayay liiska ardayda Imtixaanka galaya oo ay shaacisay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, markii la baarayna ay ogaadeen in loo qoray Dropout oo loola jeedo in ardaygu uu ka haray waxabarashada ama Iskuulka.
Sidoo kale qaar kale oo kamid ah waalidiinta wajahaya dhibaatadaan ayaa Benaadir News u sheegay in Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ay u sheegtay in Iskuulada iyo Dalladaha aysan usoo gudbin magacyada ardaydooda oo ay u raadsadaan.
Benaadir News ayaa xaqiijisay in ardayda qaar si buuxda u dhigan jireen Iskuullada islamarkaana ay kaalmo hore ka geli jareen Imtixaanaadka Iskuulada qaadaan. Ardayda qaar ayaa aragnay oo natiijo wanaagsan ka keenay Imtixaanka dhexe ee Iskuulka (mid-term exam)
Previous Swan oo madaxda ku shirsan Muqdisho uga digay waxa dhici kara haddii aysan heshiin
Next QM oo walaac ka muujisay go’aankii DF ee diidmada John Mahama